Ny mpanjifa sy ny kalitao aloha
Siansa, EFISIASA avo sy fiarovana amin'ny tontolo iainana
Tena zava-dehibe ny fiaraha-miasa, ny olon-drehetra dia tokony hanana fahaizana miara-miasa amin'ny hafa. Manana ekipa tena tsara izahay:
Varotra- Ny varotra dia tsy mivarotra ny entany fotsiny. Tokony hahatakatra ny filan'ny mpanjifa izy ireo ary hamaha ny olana amin'ny fifandraisan'izy ireo mahomby, avy eo mamaly fanontaniana ary mitaky amin'ireo teknisianina sy mpitarika.
Tekinika - Mandray am-pahavitrihana ny tolo-kevitry ny mpanjifa hanatsarana sy hampivelarana vokatra vaovao hanamorana ny asa.
Famokarana — Ny kalitaon'ny fiorenany no fototry ny orinasa, manohiza mividy akora manta azo antoka, fitantanana orinasa henjana, fizotry ny famokarana tsy miova ary fenitra fanaraha-maso henjana.
Raiso ny fanapahan-kevitra marina, tompon'andraikitra amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa tsirairay.
Za-draharaha- Manome fitaovana mandroso sy rafitra fikolokoloana vato ho an'ny faritra maherin'ny 30 manerana an'izao tontolo izao mandritra ny 10 taona.
Vokatra— Vokatra maro karazana ho an'ny safidinao. Fitaovana sy volavola samihafa any amin'ny firenena samy hafa, mpandraharaha vato isan-karazany hiatrehana olana vato isan-karazany.
Serivisy --- Ny serivisy aorian'ny varotra tonga lafatra sy mahomby dia mamela anao tsy hanana ahiahy.
JEREO NY INFORMATION REHETRA